အရိုးကွဲအောင်ရိုက်မှ အသည်းစွဲအောင် ချစ်တယ်တဲ့လား? - For her Myanmar
အရိုးကွဲအောင် ရိုက်မှ အသည်းစွဲအောင် ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံကို မြန်မာလူမျိုးတိုင်းကြားဖူးကြပါတယ်။ စသလိုလို နောက်သလိုလို ပြောကြတဲ့ လူတွေ ရှိသလို၊ တကယ်အတည်မှတ်ယူနေသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီစကားပုံရဲ့ နောက်မှာ နာကျင်မှုတွေကို ကြိတ်မှိတ်ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လောက်များများနေပြီလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမိသူတွေကတော့ ခပ်ရှားရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တရားဝင်ပြုစုထားတဲ့ စာရင်းဇယားတွေမရှိပေမဲ့ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုလို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ လင်ယောက်ျားတွေ၊ ချစ်သူတွေရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကို ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီးများစွာကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နေတွေ့နေကြပါတယ်။
Related Article >>> ကြားသုံးကြား ဝင်မပါရတဲ့… အချိန်တိုင်း မှန်နေရဲ့လား?
ခက်တာက လူအများက ဒီအဖြစ်ကို ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အဖြစ်ပါ။ လင်ယောက်ျားက သူ့မိန်းမဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်တာ ဘာမှမဆန်းဘူးလို့ ယူဆကြတာပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ ရိုက်နှက်ခံရပါတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ရင် သူ့မိခင် အရင်းကတောင် ကိုယ့်ယောက်ျားက ရိုက်တာပဲ သည်းခံ၊ အချိန်တန်တော့လည်း ပြန်အဆင်ပြေသွားမှာပဲ ဆိုတာမျိုး ပြန်ပြောတတ်ကြပါတယ်။
ခေတ်တွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းလာ၊ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာပေမဲ့ မိန်းမတွေအပေါ် လက်ပါတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကလည်း ရှိနေဆဲပါ။ ဒီလို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဖြေရှင်းလိုက်မှ ကျေနပ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဆိုတာ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ ပညာတတ်၊ ပညာမဲ့၊ မြို့နေ၊ တောနေ လူတန်းစားအလွှာတိုင်းမှာ ရှိတတ်သလို နိုင်ငံမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဘက်ခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ အကြမ်းဖက်ခံနေရတာကို ရပ်တန့်ဖို့ အသိပေး၊ ပညာပေးမှုတွေလုပ်လာကြပါတယ်။ လူတွေကိုယ်တိုင်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ လင်ယောက်ျား၊ ချစ်သူရည်းစားက ရိုက်နှက်ခံရတဲ့အခါ ဒါဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ မသတ်မှတ်ဘဲ တားဆီးသင့်တဲ့ မတရားမှုတစ်ခုလို့ သဘောထားရမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးတွေဘက်က ပြောင်းလဲရမယ့် အရာတွေပါ။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက ဒီလို အကြမ်းဖက်မှုကို မကြိုက်သလို ဒီလို ယောက်ျားမျိုးနဲ့ ပြတ်စဲလိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရုန်းမထွက်နိုင်သူတွေပါ။ ဥပမာ – သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ဖို့ အဆင်မပြေတာ၊ သူနဲ့ ဝေးရာကို သွားရင် အသတ်ခံရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံထားရတာမျိုးပေါ့။
Related Article >>> ကာမပိုင် လင်ယောက်ျား ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ကာမကို ကိုယ်သာပိုင်ပါတယ်
ဒီလို အခြေအနေအမျိုးမှာဆိုရင် ဒီမိန်းကလေးကို ပတ်ဝန်းကျင်က ကူညီဖေးမပေးဖို့ သိပ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘဲ တခြား အခြေအနေမျိုး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်လို့ ယောက်ျားဖြစ်သူက ရိုက်နှက်တဲ့အခါမှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က မနေနိုင်ဘဲ ကူညီပေးကြတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရိုက်ခံရသူ အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်က သူ့ယောက်ျား သူ့ကို ရိုက်နှက်နေခြင်းဟာ သူတို့လင်မယားကိစ္စသာ ဖြစ်နေတာမို့ အပြင်လူက ဝင်ကူပြီး သူ့ယောက်ျားကို ရန်လုပ်တာမျိုးကို လက်မခံတာပါ။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ဝင်ကူညီတဲ့သူက အလကားနေရင်း အရိုက်ခံရသူ အမျိုးသမီးရဲ့ ရန်မူခြင်း၊ ရန်စောင်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ ဒါဟာလည်း လင်မယားတွေ ရန်ဖြစ်ကြရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ဝင်မကူဖြစ်ကြခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အပြင်လောကမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေလည်းအများကြီးပါ။ ကိုယ်တိုင်က အကြမ်းဖက်ခံ၊ နှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခံနေရပေမဲ့ ဒီယောကျာ်းကို မမုန်းနိုင်၊ မပြတ်နိုင်ဘဲ ချစ်ခင်စွဲလမ်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို မြင်ဖူး၊ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။
ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေကိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က အကူအညီပေးဖို့ထက် သူကိုယ်တိုင်က ဒီအခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်ချင်မှပဲ ဖြစ်မှာပါ။ တစ်နေ့ကျ သူပြောင်းလဲချင်၊ ပြောင်းလဲလာမှာပါလို့များ မတွေးစေချင်ပါဘူးနော်။ ဒီလို လက်ပါတတ်သူတွေက တစ်သက်လုံး လက်ပါနေတော့မှာပါ။
ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေ သတ္တိရှိရှိ ရုန်းထွက်ရဲပြီး ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကိုပဲ လက်တွဲနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ……
အရိုးကှဲအောငျ ရိုကျမှ အသညျးစှဲအောငျ ခဈြတယျဆိုတဲ့ မွနျမာစကားပုံကို မွနျမာလူမြိုးတိုငျးကွားဖူးကွပါတယျ။ စသလိုလို နောကျသလိုလို ပွောကွတဲ့ လူတှေ ရှိသလို၊ တကယျအတညျမှတျယူနသေူတှလေညျး ရှိကွပါတယျ။
အဲဒီစကားပုံရဲ့ နောကျမှာ နာကငျြမှုတှကေို ကွိတျမှိတျခံစားနရေတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ဘယျလောကျမြားမြားနပွေီလဲ ဆိုတာ စဉျးစားမိသူတှကေတော့ ခပျရှားရှားဖွဈပါလိမျ့မယျ။ တရားဝငျပွုစုထားတဲ့ စာရငျးဇယားတှမေရှိပမေဲ့ အိမျတှငျးအကွမျးဖကျမှုလို့ ချေါဆိုကွတဲ့ လငျယောကျြားတှေ၊ ခဈြသူတှရေဲ့ ရိုကျနှကျမှုကို ခံစားနရေတဲ့ အမြိုးသမီးမြားစှာကိုလညျး ပတျဝနျးကငျြမှာ မွငျနတှေနေ့ကွေပါတယျ။
Related Article >>> ကွားသုံးကွား ဝငျမပါရတဲ့… အခြိနျတိုငျး မှနျနရေဲ့လား?
ခကျတာက လူအမြားက ဒီအဖွဈကို ဖွဈရိုးဖွဈစဉျတဈခုလို့ သတျမှတျထားကွတဲ့ အဖွဈပါ။ လငျယောကျြားက သူ့မိနျးမဖွဈသူကို ရိုကျနှကျတာ ဘာမှမဆနျးဘူးလို့ ယူဆကွတာပါ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျက သူ ရိုကျနှကျခံရပါတယျလို့ ရငျဖှငျ့ရငျ သူ့မိခငျ အရငျးကတောငျ ကိုယျ့ယောကျြားက ရိုကျတာပဲ သညျးခံ၊ အခြိနျတနျတော့လညျး ပွနျအဆငျပွသှေားမှာပဲ ဆိုတာမြိုး ပွနျပွောတတျကွပါတယျ။
ခတျေတှေ အမြိုးမြိုးပွောငျးလာ၊ နညျးပညာတှေ တိုးတကျလာပမေဲ့ မိနျးမတှအေပျေါ လကျပါတတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးကလညျး ရှိနဆေဲပါ။ ဒီလို ကိုယျထိလကျရောကျ ဖွရှေငျးလိုကျမှ ကနြေပျတဲ့ ယောကျြားမြိုးဆိုတာ ဆငျးရဲ၊ ခမျြးသာ၊ ပညာတတျ၊ ပညာမဲ့၊ မွို့နေ၊ တောနေ လူတနျးစားအလှာတိုငျးမှာ ရှိတတျသလို နိုငျငံမရှေး၊ လူမြိုးမရှေး၊ ဘာသာမရှေး ရှိနတေတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီဘကျခတျေမှာ အမြိုးသမီးတှေ အကွမျးဖကျခံနရေတာကို ရပျတနျ့ဖို့ အသိပေး၊ ပညာပေးမှုတှလေုပျလာကွပါတယျ။ လူတှကေိုယျတိုငျက အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ လငျယောကျြား၊ ခဈြသူရညျးစားက ရိုကျနှကျခံရတဲ့အခါ ဒါဟာ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျတဈခုလို့ မသတျမှတျဘဲ တားဆီးသငျ့တဲ့ မတရားမှုတဈခုလို့ သဘောထားရမှာပါ။
နောကျတဈခုက ကာယကံရှငျအမြိုးသမီးတှဘေကျက ပွောငျးလဲရမယျ့ အရာတှပေါ။ တခြို့အမြိုးသမီးတှကေ ဒီလို အကွမျးဖကျမှုကို မကွိုကျသလို ဒီလို ယောကျြားမြိုးနဲ့ ပွတျစဲလိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခွအေနေ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ရုနျးမထှကျနိုငျသူတှပေါ။ ဥပမာ – သူ့မှာ ကိုယျပိုငျရပျတညျဖို့ အဆငျမပွတော၊ သူနဲ့ ဝေးရာကို သှားရငျ အသတျခံရမယျလို့ ခွိမျးခွောကျခံထားရတာမြိုးပေါ့။
Related Article >>> ကာမပိုငျ လငျယောကျြား ဆိုပမေဲ့ ကိုယျ့ကာမကို ကိုယျသာပိုငျပါတယျ
ဒီလို အခွအေနအေမြိုးမှာဆိုရငျ ဒီမိနျးကလေးကို ပတျဝနျးကငျြက ကူညီဖေးမပေးဖို့ သိပျလိုအပျပါတယျ။ ဒီလို အခွအေနမြေိုးမဟုတျဘဲ တခွား အခွအေနမြေိုး ရှိနပေါသေးတယျ။ ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတော့ လငျမယားနှဈယောကျ ရနျဖွဈလို့ ယောကျြားဖွဈသူက ရိုကျနှကျတဲ့အခါမှာ ဘေးပတျဝနျးကငျြက မနနေိုငျဘဲ ကူညီပေးကွတဲ့အခါမြိုးမှာ ဖွဈတတျပါတယျ။ ရိုကျခံရသူ အမြိုးသမီးကိုယျတိုငျက သူ့ယောကျြား သူ့ကို ရိုကျနှကျနခွေငျးဟာ သူတို့လငျမယားကိစ်စသာ ဖွဈနတောမို့ အပွငျလူက ဝငျကူပွီး သူ့ယောကျြားကို ရနျလုပျတာမြိုးကို လကျမခံတာပါ။ ဒီအခွအေနမြေိုးမှာ ဝငျကူညီတဲ့သူက အလကားနရေငျး အရိုကျခံရသူ အမြိုးသမီးရဲ့ ရနျမူခွငျး၊ ရနျစောငျခွငျးကို ခံရပါတော့တယျ။ ဒါဟာလညျး လငျမယားတှေ ရနျဖွဈကွရငျ ပတျဝနျးကငျြက ဝငျမကူဖွဈကွခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျး တဈခု ဖွဈမယျလို့ ထငျပါတယျ။
အပွငျလောကမှာ ဒီအဖွဈအပကျြတှလေညျးအမြားကွီးပါ။ ကိုယျတိုငျက အကွမျးဖကျခံ၊ နှိပျစကျရိုကျနှကျခံနရေပမေဲ့ ဒီယောကျြားကို မမုနျးနိုငျ၊ မပွတျနိုငျဘဲ ခဈြခငျစှဲလမျးနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို မွငျဖူး၊ တှဖေူ့းကွမှာပါ။
ဒီလိုအမြိုးသမီးတှကေိုတော့ ပတျဝနျးကငျြက အကူအညီပေးဖို့ထကျ သူကိုယျတိုငျက ဒီအခွအေနကေနေ ရုနျးထှကျခငျြမှပဲ ဖွဈမှာပါ။ တဈနကြေ့ သူပွောငျးလဲခငျြ၊ ပွောငျးလဲလာမှာပါလို့မြား မတှေးစခေငျြပါဘူးနျော။ ဒီလို လကျပါတတျသူတှကေ တဈသကျလုံး လကျပါနတေော့မှာပါ။
ဒါကွောငျ့ ဒီလိုအခွအေနတှေကေနေ သတ်တိရှိရှိရုနျးထှကျရဲပွီး ကိုယျ့ကို ခဈြခငျကွငျနာစှာဆကျဆံတတျတဲ့ခဈြသူမြိုးကိုပဲ လကျတှဲနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး ……
Tags: Domestic Violence, Family, love, Tradition, women empowerment